Iyo yekubheka ye macaroni Bolognese, yakasarudzika yemakicheni edu uye dhishi rakanakira mhuri, vana vanovada ...
Macaroni Bolognese, kudya kwemanheru kuri nyore kune kuravira kwemunhu wese
Rimwe zuva ndakakuunzira recipe yePeruvia uye nhasi tichaenda kune imwe nzvimbo yepasi kugadzirira kudya kwemanheru uye ...
Pano ini ndinokuratidza pasita recipe, iri nyore kugadzirira uye inonaka. Edza kuzviita: Zvisungo: 400 g. Ye macaroni 100 g. bota 200g. of…
Nhasi ndiro ye pasta, yakabikwa macaroni. Yakasarudzika mumakicheni edu uye anodikanwa zvakanyanya nevadiki, tinogona kuenda navo nevakawanda ...
Macaroni ine meatballs mualmond muto
Macaroni ine meatballs mualmond muto; zvinonzwika zvisina musoro, handiti? Ichokwadi ndechekuti inogona kupihwa seyese dhishi, ichiperekedzwa neyakareruka dhizeti: saladhi ...
Macaroni ine tuna uye yakagadzirirwa tomato muto
Izvo zvakaoma chaizvo kuwana vana vasingade pasta. Nekudaro, kune rimwe divi, zvakajairika kuwana vana vasinga ...
Macaroni ine tuna uye inopisa muto
Pane here chimwe chinhu chiri nyore kugadzirira kupfuura macaroni uye tuna? Iyo yakasarudzika mudzimba zhinji; dhishi rinodiwa nevakuru vese ...
Yakabikwa macaroni ine béchamel, inonaka pasita dhishi iyo munhu wese yaachada, zviri nyore kugadzirira. Pasta yakabikwa ine béchamel ndeye…
Macaroni ine aubergine, tuna uye tomato
Mapepa akareruka senge ano anowanikwa kumba. Macaroni inotibvumidza isu kutora mukana wezvakawanda zvekudya izvo zvatiinazvo mufiriji kuda kuenda ...
Macaroni neBolognese nzira yangu
Bolognese kana bolognese isosi inowanzo shandiswa kuperekedza pasita. Mucheka wakakora unoshandiswa zvakanyanya mumatunhu ari padyo neBologna, ine ...
Macaroni ine zucchini uye prawns
Paunosvika kumba wakaneta uye usinganyatso kuziva zvekugadzirira kudya macaroni aya ane zucchini uye prawns vanova ...
Macaroni ine zucchini uye chizi
Macaroni ine zucchini uye chizi, pasita dhishi ine miriwo, isu tichazopa iyo yekubata kwechizi iyo munhu wese yaanoda zvakanyanya kunyanya ...
Macaroni ine zucchini uye tomato
Isu tinotanga svondo neresipi yakapusa yekutora mukana weiyo zucchini mwaka: macaroni ine zucchini uye tomato. Chikumbiro chikuru che ...
Macaroni ine minced nyama uye eggplant
Inobatsira sei pasita. Izvo zvinotibvumidza isu kutora mukana wemwaka nemichero miriwo uye miriwo yatinounganidza mubindu, sedivi dhishi. Nhasi tinogadzirira mu 'Recipes ...
Macaroni ine nyama nemiriwo
Macaroni ine nyama nemiriwo, chikafu chakanakisa uye chakazara kwazvo. Kudya kune zvese, pasita, nyama nemuriwo. Kune mapasta ndiro ayo ...
Macaroni negoridhe hanyanisi uye huku
Pasita uye huku ndizvo zviviri zvinodyiwa zvine gumi zvekudya kwakaringana. Ndokusaka nhasi ndaedza kusanganisa ...
Macaroni ine howa uye mhiripiri
Iyi ndeimwe yeaya mabikirwo ayo achakuburitsa kunze kweanopfuura dambudziko rimwe. Kiripi inokurumidza yakagadzirwa nemidziyo mitsva inodiwa nevanhu ...
Macaroni ine chorizo ​​uye bhekoni
Chikafu chinofarirwa nemunhu wese, macaroni ane chorizo ​​nebhekoni, yakakura pasita nzira ine zvakawanda zvinonaka. Iyi macaroni dhishi imwe ...
Macaroni ne sipinashi uye yakanyunguduka cheese
Macaroni anoshanda sei iwe usingazive chekubika. Zvakakwana kuzarura firiji, kuwedzera, kuwana nzira yekuvaperekedza. Uye isu nguva dzose tine ...
Macaroni nesipinashi uye cheese muto
Ngatiendei nendiro yemacaroni ine sipinachi uye chizi sosi, chikafu chinonaka, chakanakira kudya miriwo yakadai sesipinachi, mune ino kamukira ...
Macaroni ine green pepper uye zucchini
Munguva yemwedzi uno wekupedzisira gadheni rakatumira kumba kana kugadzira dhizeti menyu. Vhiki rino rapfuura zucchini yanga iri ...
Macaroni nehuku uye sipinashi
Macaroni nehuku nespinashi, ndiro iyo kana ukayedza uchaifarira. Isu tinogara tichigadzirira pasita pamwe nemadomasi, nyama nezvimwe zvishoma. Nhasi uno ...
Macaroni ine turkey sausage uye mhiripiri
Ini ndinoda mapepeki anogadzirwa nemidziyo yatinowanzo chengeta mupaniki medu. "Zvakajairika" mabikirwo anoita kuti zuva redu zuva nezuva zvive nyore asi ...
Macaroni nesoseji uye madomasi
Macaroni nemasoseji nemadomasi ndeimwe yemidziyo yavanofarira vadiki. Macaroni inozivikanwa kwazvo, nechinhu chero chipi zvacho chatinogona kugadzirira ...
Macaroni ine nyika muto
Kutandarira pakubika pasita patinoshaya nguva ndicho chinhu chiri nyore kuita kana zvasvika pakudya chinhu chinonaka, chiri nyore uye chinokurumidza. Kunyange zvakadaro,…
Macaroni neCheese uye Sauce yeOnion
Nhasi tinogadzirira mamwe macaroni nechizi uye hanyanisi muto, muto muto uye wakapfuma kugadzirira dhishi rakakura. Ndiro yemacaroni ine ...
Macaroni nemadomasi muto uye chizi
Nhasi muKitchen Recipes isu tinogadzirira rakareruka risipi, mamwe macaroni ane tomato muto uye chizi. Ndiro ine cream cream yakakura iyo ...
Macaroni ine muto unopisa
Macaroni ine muto unopisa, iri nyore uye yakanaka kwazvo pasita dhishi. Iko kubata kunonaka kunopa yakanakisa kunhuvira kune muto wemadomasi, uyo ...
Macaroni nehowa, tuna uye tomato
Nhasi isu hatizviomesere pachedu muKubika Recipes. Isu tinogadzirira imwe yeaya mabikirwo anodiwa nemunhu wese kana anenge munhu wese: macaroni nehowa, tuna uye…
Macaroni ine tofu
Nhasi tava kuzogadzira macaroni uye tofu, chikafu chakanakira kudya kwemasikati kune hutano uye kwakareruka. Tofu chikafu chine mafuta mashoma, ...
Macaroni pamwe nemadomasi nebhekoni
Nhasi tinogadzira chinonaka pasita dhishi, macaroni nemadomasi nebhekoni, nzira yakakwana kwazvo inoperekedzwa nesaladi uye muchero ...
Tichagadzirira macaroni nemiriwo, ndiro izere nemavhithamini, iri nyore uye iri nyore kugadzirira. Chikafu chatinogona kugadzirira sekosi huru…
Macaroni ine karoti uye ham cubes
Unoyeuka here karoti yakasikwa iri mu microwave iyo yandakakudzidzisa kugadzirira mavhiki mashoma apfuura? Kana usati wave nenguva yekuyedza izvozvi ...
Nhasi tinoenda neimwe gratin macaroni, pasita dhishi risingatombokundike. Pasita inotipa mikana yakawanda yekubika ndiro dzakasiyana siyana uye ...
Macaroni kana gratin ne cod uye cheese
Ndinobvuma kuti kunyange zvazvo pasta ine nzvimbo mumenyu yangu yevhiki nevhiki inenge vhiki imwe neimwe, haisi imwe yezvokudya zvandinofarira. Wana mari yese...
Macaroni gratin nezai uye chistorra
Nhasi ndinokuunzira iyi resipi yakaitwa mumba mangu kwezvizvarwa, gratin macaroni ine zai uye chistorra. Iyi pasita dhishi ...
Macaroni gratin nemiriwo
Macaroni gratin nemiriwo, imwe ndiro yepasta, yakakwana uye ine muto dhishi, yakanaka kwazvo. Pasita kunyanya macaroni uye ...
Yese zviyo macaroni ine tuna uye maonde akaomeswa
Kune mazuva apo pasina nguva yechinhu chero uye mumwe anomanikidzwa kugadzirisa chikafu mumaminetsi gumi (uye kutora mapikicha akashata ne ...
Wholemeal Macaroni neZucchini
Nhasi ndinokuunzira resipi yakapusa, ine hutano uye inogona kushandiswa zvakare, sezvo uchigona kuisa miriwo yatinayo mufiriji,…
Vegetable macaroni a la boscaiola, Italian recipe
Kana mukati mevhiki iwe uri kukurumidza kugadzirira chikafu, nyora iyi recipe. Iyo Boscaiola pasita yeItaly mavambo inosangana mune ...
Tichagadzirira dhizeti ine hutano hwechiedza chitsva chemuchero saradhi kuti iwe utore panopera masikati kana kudya kwemanheru, uri gadziriro yaunogona ...
Michero saladhi, yogati uye mascarpone
Nematembiricha akakwirira ezhizha zvakajairika kuti tinorasikirwa nechido chedu uye tinongoda hydration nekunwa mvura. Usambofa wakamira ...
Madeleine idiki rakaumbika rakagadzirwa nesiponji keke rine mavambo anoita kunge ari munharaunda yeLorraine, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwe
Madeleines euchi neorenji
Kufunga nezve Chipiri chinotevera, ini ndagadzira huchi uye orenji madeleines. Ndakafunga kuti vanogona kuva inotapira zvikuru yekushamisika ...
Zvigadzirwa zvemumba nemakeke emapine
Homemade muffin nemapine nzungu, yakanakira kwekuseni kana tudyo. Iko hakuna zvirinani pane kubheka mamwe anonaka muffin, akapfuma uye ane muto nyowani kubva ku ...
Homemade manhanga muffin. Kudzoka kuchikoro kunotanga uye pamwe nako kugadzirira makeke uye muffin. Ndinoda mabikirwo anosanganisira michero, miriwo, ...
Muffin nemafuta emuorivhi
Nhasi ticha gadzira zvinonaka muffin nemafuta emuorivhi. Iyo yakapusa tsika yechinyakare inogadzirwa muffin ine hupfumi hwakanyanya kuravira kwemafuta. ...
Nhasi mamwe muffin ane chokoreti. Takatanga Nyamavhuvhu uye pamwe nekudzoka kuchikoro, takatanga nekudya kwemangwanani uye tudyo, saka aya mafini ...
Muffin ane donut glaze, inofadza
Iyi recipe yeDonut Frosting Muffin yave iri pane yangu "yekuita" runyorwa kwemwedzi mishoma. Nerunyorwa rurefu ini ndinaro, ...
Muffin ane plum jamu
Ndinoda kubika makeke uye muffin. Zvichida imhaka yekureruka kwavo kana nekuti ini ndinogara ndichiona zvichinakidza kuvaona vachikura muchoto. ...
Muffin ane walnuts
Nhasi ndinokuunzira mamwe muffin anonaka ane walnuts. Iyo huru yekubheka yekudya kwemangwanani kana zvekudya. Izvi zvakare zvinotapira ne maple syrup, ayo ...
Hapana chero chinhu chiri nani kupfuura zvakagadzirwa nemapateni zvehuswa hwehuswa. Kazhinji tinotarisa kumakeke asi nhasi ndinokumbira imwe inonaka yemamondi muffin, ...
Nungu uye cocoa muffin
Tinofanira kutanga vhiki nekubheka mamwe manhanga muffin? Kumba kwedu taida kubatidza hovhoni kuti tibike chinhu chingatitendera kuzvipa ...
Chocolate muffin. Akareruka muffin ekugadzira, nekukurumidza uye aine matatu chete zvigadzirwa. Yakanga yave nguva yakareba kubva ndagadzira makeke uye ini ndanga ndanga ndichida kwenguva yakareba ...
Chokoreti orenji muffin
Pane mashoma musanganiswa wandinofarira kupfuura chokoreti uye orenji kana zvasvika kune zvinotapira mabikirwo. Ndosaka ndisingakwanise kuramba ...
Chokoreti uye nzungu muffin, yakakosha iyi Chishanu uye kutanga kwemazororo
Sezvo iwe uchiziva kuti izuva rekupedzisira rechikoro, saka, kwandiri, mazororo angu akatotanga !! Uyezve, iChishanu! Saka,…
Greek yogati uye chokoreti muffin
Chokoreti uye maGreek yogurt muffin ayo andinofunga nhasi ibhomba! Chivi chinotapira chinongofanirwa kuravira mune zvidiki zvidiki uye ...
Kokonati muffin, zvinonaka uye zvinopisa
Uye heano mamwe anonaka emu coconut muffin, ayo anozoshanda kutapira zvishoma inotonhora nguva yechando masikati anotiperekedza mu ...
Yese gorosi spelled hupfu muffin
Nhasi, Svondo, tinozvifadza isu muKubika Mapheka neaya ese akazara hupfu hwemufini. Mamwe akareruka asi akakwana muffin e ...
Akabuda mukaka muffin
Nguva nenguva paBezzia tinoda kuzvibata isu kune chinotapira. Kunyanya pakudya kwemangwanani kana sehove yekuperekedza kofi yakanaka With…
Tichagadzirira nzira yakapusa yemoni muffin yenguva yekudya. Izvo zviri nyore kwazvo kugadzira zviwitsi mune chero ...
Ndimu muffin, maranjisi kuravira
Kupera kwevhiki hakuna kudaro kana tikasabika keke kana muffin pakudya kwemangwanani kumba. Izvi zviri nyore uye zvakagadzirwa ...
Cream muffin, nyoro uye yakanyorova kwazvo
Aya mafini ave chinhu chenguva dzose chemumba kubva pandakavawana. Mapepa akareruka dzimwe nguva akanakisa uye ...
Peya uye chokoreti muffin yeiyo impromptu snack
Kune mabikirwo aunonzwa kuda "kuteedzera" nekukurumidza paunovaona. Izvi ndizvo zvakaitika kwandiri neaya peari uye chokoreti muffin kubva ku "Sweet Bites", ...
Vanilla muffin (isina zai), yezvikafu zvishoma nevana
Zvinowanzoitika, kunyanya ikozvino kuti chikoro chatanga, kuti dzimwe nguva vana vedu vanokoka shamwari dzavo kumba kwavo kana vane chekuita ...
Yogurt muffin ane karoti
Yogurt muffin ane karoti, akapfuma, ane muto uye nyore kugadzirira. Yakanakira tudyo kana chikafu chamangwanani. Iyo nyore nzira iyo yakagadzirirwa ne ...
Kwekudya chamangwanani, mamwe akazara gorosi muffin asina shuga. Kwekudya kwemangwanani kana zvekudya zvekudya ivo vakapfuma kwazvo uye vakagadzirwa mumafini. Ivo vane hutano hwakanyanya, sezvo iyo ...
Makeke akazadzwa nocilla nechokoreti kupfeka
Mapepa anhasi anonyanya kugadzirirwa vanoda chokoreti. Iyo inonaka, inotapira uye inonaka muffin yakazadzwa neNocilla yakavharwa ne ...
Mukaka mayonnaise isina zai
Iyi mayonnaise inouya inobatsira yezhizha sezvo ichigara kwenguva refu uye isu hatina salmonellosis matambudziko. Zvisungo: 1 girazi remafuta ezuva ...
Iyi mayonnaise yakanaka kune yakabikwa, marasha, huni-yakabikwa kana yakakangwa nyama yenguruve. Zvinotora maminetsi makumi maviri uye ...
NZIRA YOKUCHENESA RWIZI RAKANGWA
INGREDIENTS: Crayfish KUGADZIRIRA: Panguva yekuenda kunovabika, kwete kare nekuti vaizodururwa, vanoshambidzwa nemvura yakawanda inotonhora. Nguva imwe…
Nguruve Vanodzinga na Scampi
Vanoti iyo gelatin kubva patsoka dzenguruve inodikanwa kumuviri wemunhu, sezvo ichipa zvakanakira muviri. Nhasi ndinogovana na ...
Manoletes, akajairwa Cordoba recipe. Andalusia zuva rakakosha
Kupemberera zuva reAndalusia nhasi tarisa pane inotapira inotapira kubva kune rimwe remapurovhinzi ayo, kunyanya muCórdoba, ichiita mukurumbira ...
Artisan mantecados, madhiri eKisimusi 3
Mhoroi vasikana! Kisimusi yava kutosvika! Zvakanaka, sekuvimbisa kwandakaita, ndakuunzira imwe dhizeti yemazuva ano akakosha. Vamwe…
Nhasi ndinokuunzira recipe yemantecados kubva kuLa Mancha, yakajairika Kisimusi inotapira. Iko kunakidzwa chaiko, hutete uye hwakatsetseka hupfu, inova ...
Apple yakakangwa ne cheesecake
Ngatitorei vapfumi mupasi rino, apuro yakakangwa uye keke yeke! Isu takaita zvakafanana mune ino kamukira, kusanganisa yedu ...
Maapuro akagochwa neCalvados
Haisi nguva yekutanga kugadzirira maapuro akagochwa, tinovada! Isu takaona magadzirirwo amai vedu naambuya uye nzira yavo ye ...
Maapuro akakangwa ne yoghurimu kirimu uye nzungu
Kudonha kwagara kuchisanganisirwa kumba nekugadzirira kwemaapuro akabikwa. Ndinoyeuka amai vangu vachibika tireyi vhiki rega uye kunyangwe ivo vangangove…
Pot Yakakangwa Maapuro
Chidireti chakapfava uye chakatsetseka imwe hari yakagochwa maapuro. Isu tinogara tichigadzira maapuro akabikwa muchoto, tinoagadzira akabikwa kana…
Maapuro akakangwa, dhizeti iri nyore uye ine hutano
Maapuro akabikwa idhiri rakareruka randakadzidza kubika ndichiri mudiki. Ini ndaida kubatana mukugadzirira kwayo nekuisa shuga ...
Chocolate akanyika maapuro
Iyo yekubheka iyo yandinokuunzira ikozvino yakatsaurirwa kune idiki diki reimba, kunyanya kune avo vanoona zvichinetsa kudya ...
Marmitako iri nyore kwazvo, yakakwana uye inonaka recipe yeBasque. Tinogona kuzviita ne bonito kana ne tuna uye, panguva ino, ticha ...
Marmitako kune vanotanga
Zvakawanda uye zvakawanda zvedu zvinoramba kuwira mumuedzo wekutsanya chikafu uye mafuta nguva dzese panouya mugumo ...
KUSVIRA KWEMAHUKU OREO
ZVINOKUDZWA: * 1 pasuru ye220 gr mini chokoreti oreo makuki. * 1 gaba remukaka wakanyoroveswa we395 gr. * 1 bhati ...
Maamondi marqueas ndiwo anonaka echinyakare eKisimusi anotapira kubva kuLa Mancha. Iwo maKisimusi marqueas ane juzi uye akapfava zvidiki zvidiki ...
Kuti munhu wese anoda pizza ndezvechokwadi, asi unoita sei mukanyiwa wakanaka? Kutanga kutanga pane izvi ...
Nyore, isina kunetseka-isina bundu bundu
Ndakaedza nzira dzakasiyana dzekugadzira bundu rakasiyana siyana rinogona kushandiswa kugadzira empanadas, madomasi akaomeswa kana kunyange pizza, uye iri ...
Mbeu pizza bundu
Pizzas ndiwo emanheru par kugona pakati peshamwari, asi nhasi tinokusiyira iyi vhezheni itsva ine mukanyiwa unonaka wembeu, sezvavari ...
Dumplings ane zviyo zvinokambaira
Nhasi ndinofunga kugadzira zvinonaka uye zvinovaka muviri zvinotapira zvine chibage chinotonhorera pamuromo kuti vana vanobva ...
Maude (huku yakachipa)
Zvisungo: 1 punipuni yesinamoni 2kg yemapatatisi, yakasvuurwa uye yakachekwa Oiri 1 huku, isina mabhonasi uye kucheka kuita zvidimbu 1 kiyipuni pepper ...
Mazai machena mayonesi (kupfeka)
Ini ndinopa nzira yakapfava yekugadzira kuitira kuti iwe ugone kuishandisa mune dzakasiyana gadziriro, nekuti iyi mayonnaise (kupfeka) yemazai machena iri ...
Anchovy uye caper mayonnaise
Iyi mayonnaise inoshandiswa kurongedza uye kuwedzera kunaka kwe: hove yakabikwa kana yakabikwa nenyama. Mumaminetsi mashoma, mayonnaise iyo inokupa iwe ...
ZveIsita, kana zvebato ripi neripi, tinopa iyi yekubheka neimwe tambo. Zvisungo: 100g yematatata 50g. karoti 50g. yemapizi ...
Chickpea uye karoti mayonnaise
Zvisungo: ½ mukombe wakabikwa makarotsi ½ mukombe wakabikwa nhokwe 1 tbsp. Lemon muto ¼ tbsp oregano munyu Kugadzirira: Rova zvese zvinoshandiswa ne ...
Kuenderera mberi nemabikirwo ane nyemba, edza iyi inonaka (uye inovaka muviri) lentil mayonnaise, yakanakira avo vadiki kumba vasingatidye ...
Buttery bhinzi mayonnaise
Edza iyi recipe sezvo iri yakanakira kutanga kwe canapés kana toasted buns. Zvishongedzo 250 magiramu ebhatiri bhinzi 2 mavhavha egariki ...
Zvisungo: 1 hanyanisi, yakakoswa zvakanaka, 1 gariki, minced, 1 zai, 800 gr. nyama yehuku Munyu uye mhiripiri 1 tbsp parsley 2 tbsp ...
Creamy huku medallion, nyore uye inonaka kudya kwemanheru
Hapana chinhu chiri nani kupfuura nzira yakapusa yakapusa yekudya kwemanheru, chimwe chinhu chatinogona kugadzirira mumaminetsi mashoma, pasina kana bongozozo zvichingodaro ...
Crispy huku medallions nekikos
Pane dzimwe nhambo tinogadzira zvingwa zvehuku zvechingwa kana micheka ine zai chete uye makeke ezvingwa. Nekudaro, nhasi tinokupa tip kune ...
Mussels kune vinaigrette
Nenguva yezhizha, ndiro dzinotonhora uye tapas zviri mumood uye idzi mamassels ane vinaigrette akakodzera, anokurumidza uye ari nyore kugadzirira. Muzhizha havagone ...
Mussels ane machipisi
Nhasi, mussels ine machipisi, mubatanidzwa wakanakisa kunyanya kune vadiki. Mussels sosi yepuroteni iri nyore kugaya, yakawanda ...
Mussels mudomasi nemuriwo muto
Kune nzira dzakawanda dzekugadzirira mussels uye kusvika svondo rapfuura ndakanga ndisina kuyedza iyi. Iyo mussels mumadomasi muto uye ...
Iyo yekubheka iyo yandinofunga nhasi iri nyore kwazvo uye imwe yeaya aunofarira zvakanyanya, mamwe mamissels mumuto, chinonaka kwazvo chinofadza kana chinotanga ...
Mussels mune zvinonhuwira tomato muto
Mussels mune zvinonhuwira matomatisi muto inotora nzvimbo ine rukudzo patafura yangu. Ndichiri kuchenesa mussels nyowani kunonetsa, handisi kuenda ...
Mussels Muchi Hot Sauce
Mussels mune zvinonhuwira muto, dhishi rizere nekuravira. Chikafu chinonaka chegungwa chatinogona kugadzirira munzira dzakawanda, dzakabikwa, mutomatisi muto, ne ...
Mussels muhombodo yavo ine minced miriwo
Kana iwe uchida resipi yehusiku ihwohwo kana iwe uchikoka mumwe munhu kuzodya kumba kwako kana chekutanga dhishi iyo ...
Mussels kana gratin
Nhasi ndinokuunzira recipe inonaka mumatanho matatu ari nyore. Shamba, wira uye grill. Uye chishamiso! Dzimwe mussels dzinonaka kana gratin. Usapotsa nhanho ...
Tiger mussels kana yakakanyiwa
Tiger kana dzakaputirwa mussels dzakanakira aperitif kana Starter, zvinonaka. Ivo vakagadzirirwa neinoshamisa béchamel uye mamassels, iwe unopfuura kuburikidza ...
Peach yakakangwa ne ice cream
Zvibereko zvekudyiwa zvinozorodza kwazvo muzhizha. Mu 'kubika mabikirwo' takaita akatiwandei nemapichisi, unozvirangarira here? Yogurt makapu ane peach, ...
Peaches muwaini tsvuku
Peaches muwaini tsvuku, dessert yakafuma kwazvo. Iye zvino tave nemapichichi akanaka kwazvo uye tinofanira kutora mukana wekuadya nekugadzira madhiri navo.
Melon yakakangwa nemarnuts
Ndakanga ndisati ndambofunga nezvekugadza vise, kudzamara ndariwana mune yekudyira menyu yakasanganiswa nemamwe mahebhu. Kana uchida vise ...
MONONI MU SYRUP
ZVINODZIDZISWA: - 1 vhudzi hombe - 1 sprig yeminti nyowani - 4 mashupuni euchi - 1 ndimu KUGADZIRA: - Geza vise mushe ...
Nhasi ndinokuunzira yakanaka yekugadzira quince recipe. Kana iwe uchida quince, zvakanakira kuzviita pamba, zvakanaka kwazvo uye zve ...
Nhasi tichagadzirira dhizeti yakasarudzika yemakapu akabikwa, iri nzira yakapfava yekugadzirira uye yakanakisa kuravira pakupera kwemasikati kana ...
Stew nemapatatisi uye zvidimbu zvemombe
Isu tinoziva kuti resipi yanhasi haigone kufarirwa nemunhu wese. Iyo yemiriwo stew haina mukurumbira wakanaka kwazvo, kunyanya pakati ...
Svondo rinouya vazhinji vedu tichave tichipemberera Manheru eKisimusi. Husiku kune mhemberero dzakawanda dzinozoitika nemhuri yedu neshamwari. Kana iwe uchizorovedza muviri ...
Zvino sezvo aya mazuva akakosha asvika, isu tese tinotanga kufunga nezvemabikirwo atichagadzira gore rino uye yedu yeKisimusi menyu ichave ...
Kisimusi Menyu 2019
Mumavhiki apfuura tanga tichikukurudzira mabikirwo akasiyana siyana ekuti upedze yako yeKisimusi menyu. Vazhinji vedu vane chokwadi chekuti iwe uchave uine ...
Kisimusi Menyu 2021
Mumavhiki apfuura tanga tichikurudzira mabikirwo akasiyana ekuti upedze menyu yako yeKisimusi. Tine chokwadi chekuti kune vazhinji venyu ...
Kisimusi menyu yekurwisa dambudziko
Pamazuva eKisimusi aya apo mhuri yese inowanzo kuungana, zvinodikanwa kugadzirisa mamenyu kubhajeti redu. Ndokusaka kubva kuLas Recetas Cocina iwe…
Pane zvishoma zvasara zveZuva raValentine, nekudaro, kubva ku lasrecetascocina takagadzirira menyu inonakidza yezuva iro rinokosha revanoda. Mu…
Menyu yeKisimusi ino
Kwangosara mazuva mashoma kusvika rimwe remazuva anotarisirwa kune vakawanda rasvika: Kisimusi. Uye muKubika Mapepa isu takafunga nezve ...
Menudo kana tripe stew, yakasimba yekupuni stew
Kana paine chimiro cheiyo Autumn mudunhu reCádiz, ndicho chikafu chinonaka chechickpea stew uye tripe, kana ...
Ghost meringues yeHalloween
Halloween iri kuuya uye sekuziva kwedu uye vazhinji venyu muri kupemberera iyi pati, hatidi kupotsa mukana wekukuratidzai vamwe ...
Iyo yekubheka yanhasi yakanyatsogadzirirwa mhando nhatu dzevanhu: vadiki, avo vanowanzo kuve avo vanotibvunza isu zvakanyanya kune tudyo ne ...
Chikafu chine hutano nema strawberries
Munguva pfupi yapfuura, nekuuya kwekupisa uye yakanaka mamiriro ekunze, zvinofadza uye zvekudya zvekudya zvine hutano zvakanyanya uye zvinotonhodza kupfuura munguva yechando. ...
Kana iri Kisimusi uri kuzogamuchira mhuri neshamwari mumba mako, iyi hake a la marinera ndiyo imwe nzira yakanaka yekuvaraidza. A…
Makore mashoma apfuura ndanga ndakatarisana neye hake hove yekutengesa hove, ndakanga ndisati ndambofunga kuti zvaitaridzika zvinotyisa. Zvakatoipisisa, ndipo pandaka ...
Nhasi tava kuzogadzira hake yakabikwa, ichiperekedzwa neimwe mbatatisi, hanyanisi uye mamwe akasvuurwa emapaini, chikafu chakazara uye chakanakisa. Unogona…
Yakabikwa hake nechard yakashongedzwa
Chikafu chakapfuma chakazara, kuitira kuti usasvibise kicheni zvakanyanya sezvo uchingosvibisa ndiro yeovheni uye ovhoni chete. Izvi zvinonaka ...
Hake nepaprika, chikafu chisina kujeka chechiedza uye hove dzakanaka kwazvo. Hake nepaprika ndeyechinyakare mumakicheni edu. Chaizvo ...
Hake nemaprawn mutomato muto
Iyo yekubheka iyo yandinofunga nhasi inzira yakanaka yekuburitsa chando hake fillets mune inoyevedza uye inonaka nzira. Uye usafunge kuti ...
Nhasi ticha gadzira yakapusa uye inokurumidza hove dhishi kugadzirira, hake ine prawns. Hake hove chena nyama ...
Hake ne paprika mbatatisi
Inonaka hake ine paprika mbatatisi, iri nyore, ine hutano uye yakagadzirwa kumba. Ndiro yakazara mavhitamini akareruka. Hake ihove chena kwazvo...
Kutsvaga yekukurumidza uye inowirirana hove recipe? Iyi hake nemapatatisi mualmond muto yatinofunga nhasi inova huru ...
Hake ihove yakapfuma kwazvo uye inoshanda kwazvo kuunza kune idiki imba yacho nekuti haina kana ...
Hake pamubhedha wepea
Nhasi ndinokuunzirai yakachipa uye yakapfava hove recipe, inokodzera nhengo dzese dzeimba (kusanganisira vadiki). Zviri nezve…
Hake mumuto, ndiro huru yezororo idzi. Kugadzirira hove kuri nyore, asi mazuva ano kana akabikwa zvakanyanya, zvirinani kuigadzira ...
Tiri kuenda kunogadzira hake mumuto, nzira yakapusa uye yakapusa kugadzirira. Hake hove nyoro, chena, haina mafuta, ...
Hake muAmerican muto
Ko mapato akatanga sei? Kumba, paKisimusi Zuva, tinogadzirira hake muAmerican muto, yechinyakare yatisingazomboramba. Ndinganyepa kana ndikati ...
Hake mumuto nemucrocoli
Hake mumuto ne broccoli, iri nyore uye ine hutano nzira. Kubatanidza hove nemiriwo hazvisi nyore, asi zvinogona kusanganiswa nemuto ...
Iyo hake mumuto nemapaizi ayo atinogadzirira nhasi izano rakazonaka reKisimusi inotevera. Iyo nzira yakapusa, inokurumidza uye isingadhuri; ...
Hake mumuto pamwe eels
Hake mumuto pamwe nemaeels, dhishi hombe kugadzirira pamapati. Hake hove chena, ine nyama nyoro inowanzo farira ...
Hake mumuto nemazai zvihuta
Hake mumuto nemazai zvihuta, yakapusa dhishi yakanaka kugadzirira pazviitiko zvakakosha, senge mapato, neshamwari kana mhuri, dhishi ...
Hake mumuto nemucheka wehove
Hake mumuto ne cuttlefish, hove yakapfava dhishi ine muto muto. Iyo hake mumuto nemucheka wechettlefish, chaiyo dhishi kubva ku ...
Hake muVeloute muto, nekukurumidza uye nyore kudya kwemanheru
Hove chikafu chakapfuma, chine hutano uye chinovaka muviri icho zvakare chinokurumidza kugadzira. Saka kana iwe usiri kuda kuve wakaomesesa mu ...
Hake mune muto muto
Vana vanopererwa kana vaine nzara uye vanamai vanotya uye vanomhanyira kubika chimwe chinhu chinonaka asi chine hutano, ...
Hake in sauce: kukurumidza recipe yeKisimusi
Dzimwe nguva tinoomerwa zvakanyanya kana tine vaenzi. Tinoda kuvashamisa nechimwe chinhu chakakosha chatisingagaro kutonga uye kupedzisira chava kutikurira kana dambudziko rangobuda, ...
Hake yakarohwa nechibage
Hake yakarohwa nechibage, muto uye wakanaka kwazvo. Haasi munhu wese anogona kuva nehupfu hwakajairika, asi nhasi tine zvakawanda zvingasarudzwa ...
Hake yakarohwa mumuchu weeek
Kisimusi iri kuuya uye muKubika Mapoka isu tinoda kukubatsira iwe kuvaka yako pati menyu. Kusvikira mitambo yatanga isu tichange tichikurudzira ...
Nhasi ndinopa hake hake yakazara nenyama yakabikwa, yakanaka sarudzo yekugadzirira zororo kana kuva nevaenzi, kwatinogona kusangana ...
Dzungu uye jamu reorange
Isu tiri mumwaka wemanhanga neorenji uye kana munda wemichero une rupo neyakare, zano rakanaka nderekugadzira jamu renhanga…
Strawberry uye chia jam
Nhasi tinogadzira nzira yakapusa yekuti ukangoedza ndine chokwadi chekuti uchadzokorora. Iyo sitirobheri uye chia jam, ...
Homemade sitirobhu jam
Dzimwe nguva isu tinongoshandisa jam dzekuti toast kana zvimwe zvakadaro. Asi majamu ane zvakawanda zvekuwedzera kune edu ezuva nezuva madhiri ...
Homemade ndimu jam
Maswiti ekuzvigadzirira ndiyo sarudzo yakanakisa yekunakirwa madhiri kana, mune ino kesi, isu vedu tinofarira kunakirwa nejamu rinonaka ...
Peach jam, yakafuma uye inogadzirwa pamba. Ini ndinoda mapichisi, ndeimwe yemichero yangu yezhizha yandinoda uye sezvo ini ndakaedza kugadzira jam ...
Chinanazi jamu kuchengetedza
Iyi inonaka uye inovhenekesa chinanazi jamu iri nyore nzira yekugadzira uye zvakare nekuti kana yagadzirwa unogona kuichengeta yakarongedzwa pasina kunetseka ...
Isu tinowanzo sanganisira jam mukudya kwedu, kazhinji michero, asi iwe unofungei kana isu tikaendawo nemiriwo? Muizvi…
Soya bhinzi jamu kana inotapira
Nhasi ndinofunga kugadzirira mabikirwo ejamu rinonaka kana rinotapira randaishandisa rinozivikanwa (rakabikwa) bhinzi yesoya sechikafu chinovaka muviri.
Zvisungo: 4 mafirita e grouper 1 musoro wegoriki Oiri Pepper munyu Kugadzirira: Bhuraira iyo mitsetse yakarongedzwa kuravira kuti uiname. Rongedza ivo mugango rinogocha. ...
Bio mupunga sanganisa ne tofu uye miriwo
Une shamwari inodya zvinomera here uye iwe hauzive chekumudyira? Nhasi tinokuunzira nzira yakakwana yauchada mese, musanganiswa we ...
Sanganisa nezvinonhuwira zvevaMoorish skewers (gwayana kana nyama yemombe)
Gwayana skewer rakakosha mukati meMaghreb gastronomy, zviri nyore kwazvo kugadzirira, isu tinongofanirwa kuziva musanganiswa wezvinonhuwira uye ...
Panogona kuve nechikafu chetsika mupasi kupfuura mafufu here? Isu hatifunge! Mune ino kesi ini ndinokuunzira iwe recipe yemamwe mafufu ...
Migas kubva kuAlmeria
Sezvo isu tichiwanzoita zuva rega rega, tiri kuzokuratidza inoyevedza nzira yekuti kunyangwe wanga wave kumaodzanyemba kweSpain unenge watoedza ...
INGREDIENTS: - 2 mavhavha egariki - 10 g yemori chorizo ​​kana bhekoni. - 200 g mvura - 200 g yeupfu hwechibage ...
Nhasi ndinokupa iwe recipe yeMilanese a la Provençal kuitira kuti iwe uve mambokadzi wekicheni. Zvishongedzo 1 kirog ye buttock schnitzel, ...
Iyo aubergine milanesas ndeimwe yeaya akakosha ndiro kumhuri yese. Kune vanoda aubergine, musanganiswa wema flavour ...
Yakabikwa nyuchi schnitzels
Ini ndinopa iyo inokurumidza, yakapusa uye isingadhuri recipe: Zvimisikidzo 1/2 kirogiramu yenyama yeMilanese inogona kunge iri chiuno, mativi kana chiuno bhora 1/2 ...
Yakabikwa lentil schnitzels
Yakabikwa lentil milanesas chikafu chine hutano nekuda kweiyo fiber uye ayoni zvivakwa, asi tichiasanganisa iwo ne brown mupunga isu tichawana ...
Yakabikwa Hake Milanesas
Ini ndinopa nhasi nzira yakapfuma kwazvo yekupa hove dzakagadzirwa neimwe nzira kune mudiki uye kwete mudiki kwazvo wemba. ...
Inokurumidza zvinonaka zviri nyore kugadzira kana iwe uchida kugadzirira kuruma neiri dhishi, unogona kuzvicheka kuita zvidimbu uye kuzvifashukira, fry ivo uye kuvashandira vachitonhora kana kudziya. ...
Milanesas ane round zucchini
Round zucchini milanesas chikafu chine hutano uye chinovaka muviri kune vese vemhuri kuti vafarire masikati kana kudya kwemanheru.
Kana iwe uine zuquinis mufiriji yako uye iwe usingazive zvekuzvigadzirira nazvo, nhasi ini ndinopa kamukira iyo yaunogona kubuda munzira: Zvinongedzo ...
Zvisungo: 1/8 Kg. Yenguruve inogadzira Munyu 2 Kg. Yembatata yakakangwa 2 kgs. yemapatatisi akachekwa uye akabikwa 1/8 kgs. mafuta enguruve kana mafuta muhombodo ...
Millefeuille nekofi kirimu
Milhojas inotapira yechinyakare inogadzirwa nematanho akasiyana ehupfu hwakabikwa uye hwakapindirwa nekirimu yekeke kana kamu cream, kunyanya. Mukubika mabikirwo ...
Aubergine millefeuille nemupunga uye crunchy chizi
Dzimwe nguva, kugadzira madhishi akawandisa uye akaomesesa hakudhuri chinhu, iwe unongoda kuda kubika uye uine nguva shoma. With the…
Aubergine millefeuille ine nyama, yakagwinya uye inokurumidza recipe
Mazai mbichana chikafu chakapfuma kwazvo munzira dzese. Iine mabhenefiti mazhinji emuviri wedu, mukuwedzera, iwo ari mashoma macalorie. For…
Puff pastry uye cream millefeuille
Kwemazuva ano tinokurudzira dhizeti inotapira kwazvo. Dhigirii rekutambudzika; Nyore Kugadzirira nguva: maminetsi gumi nemashanu + 15m ekubika Zvinosanganisa zvevanhu vana: 30…
Mbatatisi uye Nyuchi Millefeuille
Rakareruka uye inonakidza yekuziva mune yayo mharidzo. Nembatatisi nemombe yemombe tichaita gadziriro yakapfuma yatino ...
Mini Croissants yekudya kwemangwanani uye tudyo
Mini croissants kana croissants akarumwa akakwana kuperekedza yako yemasikati kofi. Achangobva kugadzirwa ivo chikafu chinonaka; humbowo ...
Mini chokoreti yakazadzwa croissants
Nhasi ndinokuunzira iresipi yakapusa, mamwe macroissants mashoma akazadzwa nechokoreti. Izvo zvakakodzera kugadzirira nekuti iwo maswiti anonaka. Iyo cruasant ndeye ...
Mini huku croquettes, chisvusvuro chakanaka chevadiki
Mhoro zvakanaka! Nhasi ndinokuunzirai iyi yechinyakare mabikirwo, mamwe ehuku makokoreti. Iyi nzira yakanaka kuti tikwanise kutora mukana weiyo nyama yatakasiya ...
Mini burgers ane caramelized onion
Mini burger ane caramelized onion, iyo yekudya kwemanheru yemhuri yese. Izvo zviri nyore kugadzirira uye kuvaita vane hutano hwakanaka uye hunonaka. Tinogona kuvagadzirira ...
Mini bhabheriji muffin
Chero chero gadget ravanondipa rekicheni rinondifadza. Ipapo handisi kuwana pekuvachengeta ... asi iri imwe nyaya. Mhando iyi yeforoma ...
Mini chokoreti napolitans
Ndarasa zvinotapira; pandakaona aya mini chokoreti maNeapolitans handina kukwanisa kuadzivisa. Ndinoshuva dai ndaiva nenguva yekugadzirira kumba ...
Mini chokoreti napolitans, dhizeti inokurumidza kuperekedza kofi. Kugadzirira puff pastry dhizeti iri nyore uye ivo vakanaka, vanogara vachiwanzovada zvakanyanya, vatove ...
Nutella Mini Neapolitans
Mini Neapolitan Nutella kana chokoreti kirimu, zviri nyore kwazvo uye zvinokurumidza kugadzirira uye zvakanaka kuperekedza kofi, tudyo kana ...
Mini pizzas nechingwa chakachekwa
Mini pizzas nechingwa chakachekwa, chisvusvuro chakakodzera kugadzirira nemhuri. Dzimwe nguva hatinzwe kuda kuomesesa, asi isu tinofanirwa kuzviita...
Bhekoni uye cheese mini quiches
Iyi mini quiches idya inonaka yaunogona kugadzira chero chiitiko. Ivo vakapfava uye vane muto zvekuti munhu wese anozovada, kunyanya ...
Sipinachi uye cheese mini quiches
Ndakanga ndisingazive chekudaidza idzi dzinonaka sipinashi uye chizi kuruma: mini quiches kana inonaka muffin? Ivo vanogovana zvigadzirwa zvavo neyekutanga uye ne ...
Mini cheesecake nechokoreti uye walnuts
Nhasi ndinofunga kutapira svondo neiyi mini cheesecakes nechokoreti nenzungu. Chikumbiro chikuru chekushamisa yedu ...
Mini mbatatisi omelettes, sausages uye chizi
Mbatatisi tortilla inoshanduka-shanduka, nekuti inogamuchira chero mhando yemiriwo kana masoseji Inowanzo gadzirwa nehanyanisi, mhiripiri uye chorizo, ...
Mini chena chokoreti nougat
Mini chena chokoreti nougat. Kugadzirira nougat kumba kunonakidza kwazvo, kunyanya nevadiki. Tinogona kuzviita mumhando dzakasiyana uye zvichingodaro ...
Ehe, tiri pana Zvita 29 uye isu tiri kurwara nezvakawanda zvinotapira, zvakawandisa polvorón uye yakanyanya nougat ... Asi iri ...
Mbudzi chizi minitostes ine sitirobhu jam
Iye zvino muzhizha, apo zororo uye zviitiko zvekuzorora zvinowedzera, izvo iwe zvausingade kuita kupedza maawa nemaawa mukicheni kugadzirira ...
Yakasanganiswa nyanya uye cucumber ine mhiripiri
Iyo yekubheka ine akati wandei maficha akanaka: Izvo zviri nyore kugadzira. Kurumidza kugadzirira. Zvishoma zvigadzirwa zvinodiwa uye zvese zvitsva. Iyo hypocaloric (ine ...
Chinwiwa chakapfuma uye chinotyisa chakanakira mazuva anotonhora echando. Zviri nyore kwazvo kugadzira uye nezvishoma zvigadzirwa. Zvishongedzo 30 cubic masentimita e ...
INGREDINTES (yevanhu vana :): 4 kg. gwayana rinotapira zvingwa zvemhandara yemafuta emuorivhi mafuta paprika munyu uye mhiripiri KUGADZIRIRA: Iwo magiza anonatswa ...
Iyo Mona de Pascua ndeye yakajairwa nzira yeVatsvene Vhiki nemazuva eIsita munzvimbo zhinji dzeSpanish, senge iyo Valencian Nharaunda, Catalonia, Murcia, Aragon ...
Isita iri kusvika uye iine iwo echinyakare mabikirwo ehupenyu hwese. Ino nguva tinokuunzira iyo Mona de Pascua, yakajairika ...
ZVINODZIDZISWA: Kugadzirira: Tinocheka iyo ...
Fried ropa soseji ine tsvuku mhiripiri
Ropa sausage isoseji yakabatana neyakajairwa kuurawa kwenguruve. Kune akasiyana akasiyana, akajairwa enharaunda, inozivikanwa zvikuru kunge iri ...
Morenitos, yechinyakare inoidza kwazvo
Brunettes ndiwo mabatiro anozivikanwa kune vese, muyedzo unotapira uyo unonetsa kuramba. Ini munguva pfupi yapfuura ndawana nzira yekare; ehe, imwe yeaya ...
Morro a la gallega inonyatso kuzivikanwa tapas kana pincho muGalician gastronomy uye yakapararira munyika yese. Tinogona kugadzirira iyi recipe ...
Bhero mhiripiri zvisikwa
Neichi chidimbu iwe unogona kuchengeta yako bhero mhiripiri kwenguva yakareba. Zvisungo: bhero mhiripiri mafuta Maitiro: Shamba bhero mhiripiri; wobva waisa pane iyo grill muchoto ...
Nzimbe Honey Mouse
Zvisungo: 2 kututira mashupuni eshuga yeupfu 4 Mazai 250 cc yemukaka kirimu 1 mukombe wenyuchi uchi Kugadzirira: Paradzanisa yolks ...
Moussaka ndeimwe yehupfumi hweGreek gastronomy. Inozivikanwa pasi rese, yakafanana nelasagna, asi inotsiva zvidimbu zvepasta zve ...
Vangani venyu vakambodya chero eakanakisa madhishi einoshamisa yechiGiriki kicheni? Uye vangani venyu vakashinga kuisa iyo ...
Kofi mousse, dhizeti inogadzirirwa munguva pfupi. Kana, sekukuudza kwandaita, mumaminitsi gumi takagadzira dhizeti iyi inonaka ne ...
Kofi mousse nekwapurwa cream
Izai jena, rakarohwa kusvika panonaya sinou, rinopa mousse kuomarara kunoenderana kwatinoda zvakanyanya. Inonyanya kufarirwa ndeye ...
Zvisungo: 4 gelatin machira 3dl Red Wine 2 dl cherry liqueur 175g yogati 15dl cream 120g cherries 50g icing shuga ...
Chokoreti mousse, yechinyakare. Chikafu cheKisimusi kana chisvusvuro chingave chisina dhizeti? Zvakanaka, ndinokuunzirai iri dhizeti iri nyore ...
Zvisungo: 300 g yemapichisi musirasi muto we 1/2 ndimu 210 g yeshuga 250 ml yekirimu 3 vachena Kugadzirira Kutanga kwazvose, ...
Strawberry mousse, dhizeti yakanaka kwazvo, iri nyore kugadzirira. Iyi strawberry mousse yakanaka kwazvo, inogona zvakare kushandiswa, kutora mukana kune avo ...
Handizive kana iwe uchizofarira mutsva mousse wemoni sezvandinoita, asi kune avo vakadaidzira "hongu" kana vane ...
Lemon mousse nekirimu
Lemon mousse nekirimu, dhizeti inonaka uye yakapfuma, inofanirwa kunakidzwa chero nguva mukati mezuva rinopisa. Iyo mousse iri nyore ...
Kurumidza lemon mousse nebhisikiti
Mu'Kubika mabikirwo 'isu takakuratidza maitiro ekugadzira kofi mousse, nougat mousse uye kunyange ndimu mousse. Hatidi kuzvidzokorora, asi isu ...
Lemon mousse, inozorodza zvikuru
Ndinoda mousse, ingava chokoreti, kofi kana michero. Inozorodza uye isingareme zvachose, aya mafuro eFrance mavambo idhiri rakanakira mu ...
Zvisungo: 250 g yemango pulp 50 cc yejusi reorenji 160 g yeshuga 7 g yeisina kufarirwa gelatin 250 cc ...
Iyo melon mousse iripi yekuzorora uye yakapfava dhizeti inokosheswa kwazvo munguva inopisa. Tevere iwe ...
Kana panguva ino muKisimusi iwe uchinetseka nekudya nougat sedessert nenzira yechinyakare, pamwe zvinokukurudzira kuti urambe uchibheja pane ino ...
Yogurt mousse, yakapusa, inokurumidza uye yakareruka dessert, ine shuga shoma inogona kuchinjirwa kutapira, inogona zvakare kuperekedzwa nemichero iyo ...
Yoghurt uye vanilla mousse
A mousse idhizari yakanakisa, kunyanya mukati memwedzi inopisa kana iri nyowani kubva mufiriji inozorodza. Iyi yoghurt mousse ...
Zucchini Mücver: recipe yeTurkey yakabva
Mucvers ndiwo mafiritsi echinyakare eTurkey cuisine. Iwo anowanzo kugadzirirwa neakachekwa zucchini sechinhu chikuru chemukati uye iri imwe nzira huru ...
Muffin nesinamoni inoputsika
Vazhinji vedu tiri kunakidzwa nemazuva mashoma ezororo; pamwe hama. Uye ini handikwanise kufunga nezve chero chinhu chiri nani kutapira tudyo pane kugadzirira zvimwe ...
Zvisungo: 5 mazai 75 g yemablackberries 250 g yetirairi 200 g yeshuga 10g ye mbiriso 250 g yeupfu Kugadzirira: Isa iyo ...
Bhabheriji Muffin ane Frosting
Muffin chikumbiro chakakura chekuenda nekofi kungave mangwanani kana pakati-masikati. Ini ndinonyanya kuvada kwemasikati ...
Bhabheriji Almond Muffin
Nhasi tichaenda kunozvibata isu kune inotapira kurapwa neaya mablueberry nemaamondi muffin. Mimwe muffin yakapusa ine runyorwa rurefu rwezvigadzirwa zve ...
Pumpkin Bhabheriji Muffin
Pumpkin bhabheriji muffin ndiyo yakanaka yekudyira imwe nzira. Ivo zvakare vakasununguka kwazvo kuitira kuti vana vadiki vafarire ...
Manhanga Chokoreti Muffin
Iko hakuna zvihwitsi zvine chokoreti izvo zvandinogona kuramba kuedza. With aya akabatanidzwa manhanga uye chokoreti muffin iye aitamba neinobatsira; Ndakanga ndatoedza ...
Chokoleti muffin ane maonde akaomeswa
Muffin, muffin ... chokwadi ndechekuti vane chokoreti. Ehe, aya chokoreti muffin anga ari muyedzo kwandiri. Ndakawana iyo recipe pane foramu ...
Kwayakabva chikafu ichi inowanikwa muEngland ine mareferenzi mumabhuku ekubika kubva muna 1703. Zita rayo rinobva pazwi rekutanga moofin, rine mavambo ...
Chokoreti, sinamoni uye hazelnut muffin
Chokoreti, sinamoni, hazelnut ... nemubatanidzwa wakadai wezvinhu, ndiani anogona kuramba kuzviedza? Shamwari yakandipa iyo yekubheka uye mushure mekuona izvo zvigadzirwa, kwete ...
Apple sinamoni muffin
Iyi kamukira yeApple neCinnamon Muffin ichakushamisa iwe! Pamusoro pekubatanidza zvinonaka zviviri zviri kuyedza mazviri, kugadzirira kwayo kuri ...
Pakati pevhiki, kumba, tinoda kuzvibata zvakanaka. Isu tinogara tichibika keke yesiponji kana mamwe muffin kunakirwa pakudya kwemangwanani ...
Banana muffin, nzira yakakwana yechero tudyo kana kwekuseni. Aya ma muffin ari nyore kugadzirira uye kuchengetedza, sezvo bhanana ichipa ...
Banana Chokoreti Chip Muffin
Kana iwe uchida mabanana madhiri, haugone kupotsa pane aya mabanana uye chokoreti chip muffin. Chikumbiro chinotapira kutora ...
Munyu bhekoni uye chizi muffin
Kugadzirira kudya kwemanheru kazhinji kacho ndiyo imwe yemakicheni asingafarirwe, kazhinji, unosvika husiku wakaneta uye uine chishuwo chekubika.
Chocolate mug keke
Mug Makeke inoyevedza kugadzirwa. Aya makeke ega ega kana makeke akagadzirwa mumaminitsi mashanu achitibvumidza kupa munhu anonaka dhizeti kune vashanyi vedu ...
Banana uye nutella mug keke
Ndinoda sei kusanganiswa kwe nutella nebhanana. Ini handikwanise kuramba kuyedza chero dhizeti inosanganisira kusangana uku pakati pezvakagadzirwa. Kubva ipapo…
Vanilla mug keke uye sitirobhu muto
Iyo mug keke inzira yakanakisa uye yakapusa yekuve nekukurumidza uye kunonaka kutapira. Inogona kugadzirirwa nemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa uye mu ...
Kaviri chokoreti mug keke reZuva raValentine
Mug makeke chigadzirwa chikuru; Ivo vanotibvumidza isu kugadzira dhizeti mune zvishoma kupfuura maminetsi mashanu uye nenzira yakachena. Izvo hazvisvibise ...
Paive nenguva iyo mugcakes yaitora nzvimbo yepakati. Pfungwa yekugadzirira imwe keke mu microwave mumaminitsi mana yaive chimwe chinhu ...
Nougat mugcake (Krisimasi yakakosha)
Mhoro #zampabloggers! Mukubika kwanhasi tichaedza kusanganisa avant-garde uye kubheka tsika uye isu tichaedza kuita kuti zvive nyore uye zvakapusa ku ...
Aubergine musaka nemasoseji
Pazuva rino isu tinoenderera mberi nenzira itsva dzekugadzira aubergines. Mune ino kesi, ini ndakuitira iwe unonaka musaka, asi nemasoseji uye ...
Musaka wenyama uye zucchini, nzira yekunakidzwa mukupera kwesvondo
Chatova Chishanu, tangosarirwa nemazuva matatu kuti zororo ripere, dzokera kune zvakajairwa zvakare ... Zvakanaka, tichine ...
Lemon Spice Huku Zvidya
Idzi ngoma dzehuku pamwe nemon uye nezvinonhuwira zvatinokuunzirai muhope yanhasi zvakakwana kubheka uye kwete kubika ...
Akabikwa Honey Masayadhi eChidya
Kune avo vedu vanokoshesa kuva nekunakirwa nyama yakanaka dhishi patafura, iwe uchafarira iyi yehuku yekuku. Iine kuravira ...
Iyo yekubheka yehudyu yehudyu mune tsvuku waini muto, yakasarudzika yeSpanish chikafu, inyoro, yakasvinwa uye isingadhuri nyama. Tinogona kuita zvisingaperi ...
Yakagochwa zvidya zvehuku pamubhedha wemuriwo
Roast huku idhishi rinogara rakarurama. Kumba takagara tichimuperekedza nemubhedha wakanaka wemuriwo mu ...
Huku zvidya nembatatisi dzakabikwa
Huku zvidya nembatatisi yakabikwa, iri nyore, ine muto uye ine hutano resipi yekudya huku. Kugadzirira huku muchoto kuri nyore uye…
Yakaomeswa Huku Zvidya
Zvidya zvehuku zvakakomberedzwa nebhekoni uye chizi, ine yakapusa uye yakapfuma muto. Icho chidya chakanaka kwazvo, huku ine muto kwazvo ...